नयाँ शक्तिको एक्लो दौडाहामा भट्टरार्इ, अाफ्नैबाट किन एक्लिए ? – Halkaro
नयाँ शक्तिको एक्लो दौडाहामा भट्टरार्इ, अाफ्नैबाट किन एक्लिए ?
काठमाडौं । विल्कुलै फरक, नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक दल निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ शक्तिको निर्माणमा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई दुई वर्षमै एक्लिएका छन् । ३५ वर्षको कम्युनिस्ट राजनीतिबाट एकाएक ‘नयाँ कोर्स’ सुरु गरेका भट्टराई आफ्नो अभियानमा कामयावी हुन सकेनन् ।
माओवादीभित्रै रहँदा अन्तरसंघर्षमा साथ दिँदै आएका अधिकांश नेतादेखि गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिसम्म भट्टराईका नयाँ सारथिका रूपमा अगाडि देखिए । तर, पार्टीमा आएका विविध प्रवृत्तिका नेताको उचित व्यवस्थापनमा चुक्दा भट्टराई अहिले एक्लिन पुगेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा रहेको अाजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
कहिल्यै पार्टीमा ‘फस्ट म्यान’ भई लिडरसिप नलिएका भट्टराईमा लिडरसिपमा हुनुपर्ने क्वालिटी नदेखिनु र आफ्नो गन्तव्यमा आफैं अलमलिनुले अहिले एक्लिँदै जाने परिस्थिति सिर्जना गरेको बताउँछन् प्राध्यापक कृष्ण खनाल ।
← देवेन्द्र पौडेलसहित १५ नेतासँग नयाँ सक्तिले माग्यो स्पष्टिकरण
देउवा र प्रचण्डको प्रसंसा गर्दै सुष्माले भनिन्, ‘तपार्इँहरूबीचको विस्वास कायम रहोस’ →